म्यासेज गर्ने यी ५ तरिकाबाट थाहा हुन्छ , तपाई उसको लागि स्पेसल मान्छे हो कि साथीमात्र हो भन्नेकुरा !जानिराखौ ! —
2019-11-18 2019-11-18 admin
काठमाडौँ । म्यासेज गर्ने यी ५ तरिकाबाट थाहा हुन्छ , तपाई उसको लागि स्पेसल मान्छे हो कि साथीमात्र हो भन्नेकुरा ! जानिराखौ ! कुनै समयमा एक अर्कासंग भावना साटनको लागि सिमित मात्रामा स्रोत र साधन थियो ! तर अहिले को आधुनिक युग मा भने त्यस्तो छैन ! एक अर्का संग भावना साट्नको लागि बिभीन्न माध्यमहरु आएका छन् ! एक अर्काको भावनालाई साटासाट गर्ने र सिकाउने माध्यम नै बनेको छ ! पछिल्लो समय सामाजिक संजाल माध्यम यति धेरै फेमस छ कि जस्तै फेसबुक , आजकल का मानिसहरु बिशेष गरि आजकाल का युवायुवतीहरु
तर युवायुवतीहरु कुराकानी गदै जादाँ कोही साथी बन्छन् भने कोही साथी भन्दा माथि पनि हुन्छ । अधिकांश युवायुवतीको फेसबुकको जीवनसाथीको खोजीमा हुन्छन् , तर त्यसैक्रममा धेरैले बुझन सक्दैनन् , साथीको रुपमा मात्र होकी , त्यो भन्दा माथि हो भनेर । त्यसैले आज हामी तपाईलाई फेसबुकमा कुरा गर्ने साथीसँग माया छ कि साथी मात्र हो । हेर्नुस् सजिलो टिप्स
निक नेमको प्रयोग : यदि तपाईको नजिकको साथीले निक नेम राखेर कुरा गर्छे भने सम्झनुस् साथीभन्दा पनि केही माथिको संकेत हो । यदि यस्तो भएमा सम्झनुस् तपाई स्पेशल मान्छे हो ।
प्रर्सनल इमोजिज या स्टीकर धेरै पटक पठाउनु : यदि कसैले तपाईलाई मन पराउँछ भने इमोजीज र स्टिकर पनि संकेत बन्न सक्छ । तर साथीको रुपमा पठाइएको इमाजीज र स्टिकर लामो समयमा मात्र आउँछ । त्यो पनि साथी र साथीभन्दा माथिमा निकै फरक हुन्छ ।
हरेक दिन लामो समयसम्म कुरा गर्नु : यदि तपाईको केटी साथी साच्ची नै मन पराउछे भने जतिसुकै ब्यस्त भएपनि लामो समयसम्म कुरा गर्ने गर्दछन् । त्यति मात्र होइन् ,केटीले तपाईको हरेक दिनको प्यान जान्न उत्सुकता देखाउछिन् भने सम्झुस् माया छ ।
प्रत्येक फेसबुक प्रोफाइल र स्टाटसमा कमेन्ट गर्नु: यदि कसैले हरेक फेसबुक प्रोफाइल र स्टाटसमा कमेन्ट गर्छ भने सम्झनुस् माया छ । त्यसका साथै आफ्नो तस्विर र स्टाटसमा के गर्ने के नगर्ने भनेर सजेशन गर्छे भने मनमा तपाईको माया छ ।
आफ्नो बच्चापनको तस्विर सेयर गर्ने : तपाईको केटी साथी बच्चापनको फोटो इडिट गर्ने तथा अन्य तस्विरहरु जोडेर पठाउछिन् भने सम्झनुस् केही लुकेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस ! रातारात हिट भएकी रानु मण्डल अत्यधिक मेकअप पछि ट्रोल बनिन् (तस्विर सहित)
काठमाडौँ । युट्युबमा लता मंगेसकरको गीत ‘एक प्यारका नग्मा हे’ गाए पछि चर्चित बनेकी रानु मण्डल वि’वादमा परेकी छिन्। अत्यधिक मेकअप गरेपछि मण्डल वि’वादमा परेकी हुन् । युट्युबमा लता मंगेसकरको गीत गाएको देखेपछि भारतका चर्चित गायक तथा सङ्गीत निर्देशक हिमेस रसमियाले रानु मण्डललाई भेटेर गीत गाउन लगाए। त्यस गीतको नाम थियो ‘तेरी मेरी कहानी’। यसपछि रानु मण्डलको जीवनमा ठुलो परिवर्तन आएको थियो। उनी सडकबाट स्टेजसम्म पुगिन्।
रानु मण्डलको भाइरल भिडियोः
हालै एक कार्यक्रमा हिमेससँगै रानु मण्डल पुगेकी थिइन्। तर त्यहाँ उनी अत्यधिक मेकअपमा देखिएपछि त्यसै समयको फोटो यतिबेला इन्टरनेटमा भाइरल बनेको छ। सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताले रानु मण्डलले नसुहाउँदो मेकअप गरेको बताइरहेका छन्। उनी तीव्र आलोचना भइरहेको छ। उनको सामाजिक संजालहरूमा निकै ट्रोल गरिरहेका छन् । तस्विर हेर्नुहोसः
अस्ट्रेलियामा सयौँलाई रोजगारी मिल्ने सबभन्दा ठुलो गाँजाको फ्याक्ट्री खुल्दै…
एजेन्सी । तपाईँ बाहिर निस्कँदा अथवा कहीँ कतै जाँदा सडकका किनारामा रहेको रुखको जराभन्दा माथि सेतो...
जुन अदाल’तमा बुवा कार्यालय सहयोगी थिए, त्यही अदाल’तमा छोरी न्यायाधीश बनिन्
दिल्ली। प्रत्येक आ’मा बु’वा आफ्ना सन्तान’का लागि जस्तो सुकै मु’श्किल झेल्न तयार हुन्छन्। आफ्ना सन्तान’को सुन्दर...
यि हुन् विश्वकै ठुला १० सपिङ मल, चीनमा मात्रै छन् चार वटा । हेर्नुहोस्
एजेन्सी । विश्वमा किनमेल गर्नका लागि ‘सपिङ मल’ लोकप्रिय बन्दै गएको छ । सन् २००८ को...